Politikan'ny Google AdWords - Araho ireo fitsipika ireo!
Asabotsy, Aprily 30, 2011 Asabotsy 4 Febroary 2017 Chris Bross
Moa ve tsy nankatoavina ny doka nataonao noho ny fanitsakitsahana lahatsoratra na fanoratana? Raha nataonao tsara ny zava-drehetra, maninona ianao no kiakiakan'i Google?
Tsy mampahafantatra anao avy hatrany ny AdWords, doka an-tsoratra be loatra tokony hojerena indray mandeha. Manana ny algorithman'izy ireo izy ireo izay hamantatra ny doka an-tsoratra nataonao raha nandika ny politikany ianao. Ny fikarohana dia aorian'ny zava-misy foana ary tsy misy fampahalalana betsaka momba ny antony. Tena mahasosotra!
Mazava ho azy fa mahazo mailaka namana ianao avy amin'ny LPQ-Support@Google.com miaraka amin'ilay andalana; Betsaka ny fanitsakitsahana ny kaonty Google Ads anao! Aza hadino ity mailaka ity, satria tsy hampandeha ny kaontinao i AdWords raha mitohy ny fandikan-dalàna. Ny fomba tsara indrindra hialana amin'izany ratram-po izany, ary ny fihemoran'ny kaonty dia ny fahafantarana tsara ny Google Ads Policy.
At EverEffect, Manam-bintana izahay manana ny Googler taloha ho loharanom-pahalalana superstar rehefa mila miatrika ny Politikan'i AdWords. Ireto ambany ireto ny torohevitra vitsivitsy izay tokony ho ambony saina ho an'ny manam-pahaizana PPC rehetra.
Log Change Change
AdWords dia manana volavolan-dalàna mifehy ny sehatra manerantany sy ny firenena mifehy ny karazana doka atolotra. Manampy izany ny hoe miova matetika ny politika mba haharaka ny hafainganam-pandehan'ny indostria. Ao amin'ny tontolon'ny olon-dehibe maoderina, tsy hahafinaritra ve raha mametraka rafitra fampandrenesana horonan-taratasy ao amin'ny tranokala fitahirizam-bokatrao ianao mba hahafantarana anao ny fanovana politika momba ny doka rehefa mitranga izany? Hevero hoe: Google dia manana zavatra saika mangatsiaka. Antsoina hoe ny Log Change Change, ary raha mbola tsy fantatrao io dia tena mamporisika anao hanisy tsoratadidy.
Izy io dia pejy iray izay mirakitra ny fiovan'ny politika momba ny dokam-barotra rehefa mitranga izany, na mialoha kely akory aza ny famoahana azy. Amin'ny fanaovanao zatra mijery izany matetika dia afaka mijanona eo alohan'ilay fiolahana ianao ary manakana ny doka tsy hidina noho ny fiovana tsy nampoizina momba ny Politikan'i AdWords.
Olana momba ny politika momba ny zava-misy ao amin'ny drafitry ny lalao PPC
Ny lakileny dia ny mianatra ny fomba hamahana ny olana ara-politika amin'ny fomba mahomby, hamahana azy ireo haingana araka izay tratra, ary mandrafitra ny kaontinao mba hisorohana ny doka tsy hidina amin'ny ho avy.
Rehefa manatsara ny kaonty PPC ianao dia tsy tokony esorinao ny doka rehetra ataonao ka soloina vaovao raha tsy hoe vonona ny hanana ny zava-drehetra ianao mandritra ny fotoana fohy.
Ny fahazoana an'io, ary koa ny doka maro mila mandinika alohan'ny ahafahana mihazakazaka dia tokony hanantena ianao fa mety hisy fotoana fihenan'ny fotoana (na noho ny fijerena na ny tsy fankasitrahana ny doka) alohan'ny handehanan'ny doka vaovao ataonao araka izay azony atao. Noho izany, raha tsy te hampijanona ny doka rehetra ianao, ny zavatra tsara tokony hatao dia ny tazomy ny doka misy anao amin'izao fotoana izao rehefa manao ny fanavaozana ny kaontinao ianao.
Tsotra tokoa, nefa mahavariana fa ny fientanentanana amin'ny fanovana doka dia mety hiccup rehefa manadio ny zava-drehetra aloha loatra ny mpitantana kaonty PPC.
Any Etazonia, ny zavatra voalohany manamarika momba ny Politikan'ny Fampiratiana AdWords dia io mifehy ny doka fotsiny fa tsy miantraika amin'ny teny lakile. Raha miresaka matetika izy ireo, Google dia maniry ny hamela ny mpanao dokam-barotra fahalalahana araka izay azo atao amin'ny fisafidianana ny teny lakile, ary toa izany any Etazonia dia tsy manara-maso ireo teny marika marika amin'ny teny lakile. Midika izany fa raha tompon-marika ianao ary tezitra fa hiseho ny doka mpifaninana iray rehefa tafiditra ao amin'ny bara fitadiavana Google ny fe-potoana nomenao marika - azafady, very vintana ianao.
Ny fanontaniana manaraka hovaliana dia ny fomba hanarahan'i Google marika famantarana amin'ny doka doka. Raha mbola tsy nosoratanao tamin'ny Google ny teny famantarana anao ary nangataka izy ireo hanara-maso izany dia tsy ho voahaja ny mari-pamantarana anao. -Potoana! Noho ny fiheverako fa famerana ny enti-manana dia tsy mikaroka mavitrika ireo teny marika marimaritra iraisana i Google mba hitazomana hatrany amin'ny rakitra mba hanaraha-maso, ka noho izany dia tsy maintsy mametraka fitarainana TM ianao mba hanombohana ny fizotran'ny fanaraha-maso.
Ny hany sisa tavela izao dia ny hahazoana antoka fa mamafa ny AdWord Policy momba ny indostrian'ny fanafody ianao. Somary manahirana kokoa ity iray ity ary mendrika ny lahatsorany manokana… araho hatrany!
Tags: google adwordsgoogle adwords politikaFatra CP
Big Brother no namanao ao amin'ny Facebook
18 Jul 2011 amin'ny 2:14 PM
Vao avy nita ity lahatsoratra ity androany maraina. Te hizara ny zavatra niainako tamin'ny herinandro lasa aho tamin'ny Google, ary henoko raha nisy olona nanana zavatra nitovy tamin'izy ireo…
Vaovao amin'ity asa ity aho, vao niasa tapa-potoana izao nandritra ny 2 herinandro (tapa-potoana mandritra ny 2 volana alohan'izay). Nahavita satan'ny "olona mahay" avy amin'i Google aho herinandro lasa izay.
Ny herinandro lasa teo taorian'ny nandihizako manodidina ny politikan'ny mari-pamantarana momba ny fotoana niasako teto dia tonga tany amin'ny teboka malaky aho. Nanana doka vaovao marobe aho izay nolavina izay tsy dia nitovy tamin'ny fomba fampiasan'izy ireo ny mari-pamantarana marika raha oharina amin'ny doka hafa efa nekena. Nandefa mailaka aho ary nangataka fanazavana momba ny antony tsy fankatoavana ireo doka ireo raha toa ka ok ny sasany.
Tahaka ny nanomezanao hevitra momba ny teny lakile, ny fahazoako azy dia ny teny lakile dia olana misaraka amin'ny doka doka. Nefa rehefa nahazo valiny avy tamin'i Google aho momba ny fangatahako dia ity no nolazain'izy ireo tamiko momba ny teny lakile sasany izay azoko tao anatin'ireto vondrona dokambarotra ireto:
"Ny sasany amin'ireo teny lakile dia ambany ny haben'ny karoka ary mety hisy fiatraikany amin'ny fanapahan-kevitra farany amin'ny doka nataonao, noho izany, manolo-kevitra anao aho mba hanesoranao ireo teny lakile ireo amin'ny lisitry ny teny lakile."
Rehefa nanoratra indray aho mba hangataka fanazavana momba an'ity lohahevitra ity ary azon'izy ireo atao ve ny manondro ahy ireo zavatra azoko vakiana mba hanalavirana ny olana amin'ny ho avy, tsy nanolotra fanampiana izy ireo. Nasaina indroa aho mba hanala ireo teny fanalahidin'ny karoka ambany ary hampiato ny teny lakile miato satria misy fiatraikany amin'ny fanekena doka izany indraindray. Nahoana?
Apr 18, 2012 ao amin'ny 1: PM PM
Ny kaonty Google Adwords ahy dia tsy nihetsika nandritra ny herintaona. Saingy nametraka $ 10 tao amin'ny kaontiko doka aho tamin'ny farany, namorona doka ho an'ny tranonkalako vaovao. Ary ny ampitson'iny dia nampiato ny kaontiko i Google. Nandefa mailaka tamin'izy ireo aho ary nanontany hoe maninona no nampiatoin'izy ireo izany, ary nanoratra izy ireo ary nilaza fa tsy afaka nanala izany izy ireo, ary nanome ahy ny antony. Novakiako ny politikan'ny dokam-barotra ataon'izy ireo sns, ary tsy hitako izay maharatsy ny doka na tranokala misy ahy. Ny dokam-barotra dia mifandray mivantana amin'ny pejin'ny varotra misy ahy, ary mivarotra vokatra marina aho izay nandaniako saribakoly an'arivony vitsivitsy noforonin'ireo programmer. Angamba tsy mamela ny olona hifandray amin'ny pejy fivarotana intsony ny Google Adwords? Tsy azoko an-tsaina izany. Nataoko ao anaty doka ny vidin'ny vokariko ka ny olona afaka mividy izany no manindry ilay rohy. Nampiato ny kaontiko ve ny vidin'ny Doka? Misafotofoto ny fikajiana azy. Mety mila manafoana ny kaonty aho, mamoy ny $ 10, ary manomboka amin'ny kaonty vaovao. Saingy ao anatin'ireo fehezan-teny ireo dia milaza fa raha naato ny kaonty misy kaonty vaovao noforoniko dia hiato mandrakizay ary tsy afaka hanao doka miaraka amin'izy ireo intsony aho. Tena mampisafotofoto izany.
Mar 27, 2014 amin'ny 10: 20 AM
Marina 100% ianao amin'ny fampiasana kopia doka lasibatra sy firafitry ny teny lakile - manana mpanjifa izahay amin'ny orinasan-tsarimihetsika / kodiarana fiara ary ny ankamaroany dia momba ny rambony lava ho azy ireo miaraka amina haben'ny tariby sy ny velaran'ny kodiarana izay tena miangona. Raha tianao ny hijereko ny kaontinao sy handinihanao soso-kevitra vitsivitsy, alefaso imailaka aho simon.b@resultsdriven.org. na afaka mametraka antso haingana izahay raha tianao ny telefaona 302-401-4478.